Inkululeko Yebhulogi | Martech Zone
ISonto, May 26, 2013 ISonto, May 26, 2013 Douglas Karr
Lapho sicabanga ngemithombo yezindaba yesimanje, sicabanga ngezinhlangano ezinkulu zezindaba ezisungule isimilo, amazinga kanye nemikhuba. Kuzo sithola abahlola amaqiniso, izintatheli ezifundele eNyuvesi, abahleli abanolwazi nabashicileli abanamandla. Ngokwengxenye enkulu, sisabheka izintatheli njengabagcini beqiniso. Siyethemba ukuthi bakufezile ukukhuthala kwabo okufanele lapho bephenya futhi bebika ngezindaba.
Manje njengoba amabhulogi esegcwele kwi-Intanethi futhi noma ngubani ukhululekile ukushicilela imicabango yakhe, abanye osopolitiki baseMelika bayabuza ukuthi noma cha inkululeko yabezindaba kufanele isebenze kuma-blogs. Babona umehluko phakathi abezindaba futhi ibhulogi. Kubi kakhulu ukuthi osopolitiki bethu bangawufundi umlando, noma kunjalo. Isichibiyelo Sokuqala samukelwa ngoDisemba 15, 1791, njengesinye sezichibiyelo eziyishumi ezibandakanya uMqulu Wamalungelo.
ICongress ayiyikubeka mthetho maqondana nokusungulwa kwenkolo, noma ukuvimbela ukusetshenziswa kwayo mahhala; noma ukufinyeza inkululeko yokukhuluma, noma yabezindaba; noma ilungelo labantu lokuhlangana ngokuthula, nokunxusa uhulumeni ukuba alungise izikhalazo.
Iphephandaba lokuqala eNew World kwakuyi-Publick Occurences, amakhasi amathathu okubhala asheshe avalwa ngoba ayengavunyelwa yinoma yimuphi umphathi. Nakhu ukuthi lelo phephandaba lalibukeka kanjani.
Ekupheleni kwempi ngo-1783 kwase kunamaphephandaba angama-43 ephrintiwe. Iningi lalawa kwakungamaphephandaba asakaza inkulumo-ze, ayengathembeki neze, futhi abhalelwa ukuvusa ulaka lwamakholoni. Inguquko iyeza futhi ibhulogi… nabezindaba base beqala ukuba ngukhiye ekusakazeni igama. Eminyakeni eyikhulu kamuva, kwakukhona amaphepha ahlukene ayi-11,314 1880 aqoshiwe kubalo lwabantu lwango-1890. Ngawo-XNUMX kwavela iphephandaba lokuqala ukushaya amakhophi ayisigidi. Eminingi yayo ibiphrintwa ngaphandle kwezinqolobane bese ithengiswa ngepeni ngosuku.
Ngamanye amazwi, i amaphephandaba okuqala ayefana kakhulu namabhulogi esiwafundayo namuhla. Ukuthenga umshini wokubhala bese ubhala iphephandaba lakho bekungadingi mfundo ethile futhi akukho mvume. Njengoba abezindaba nabezindaba bavela, abukho ubufakazi bokuthi ukubhala kwakungcono kakhulu nokuthi kwakuthembekile.
Ubuntatheli obuphuzi ubambe e-United States futhi uyaqhubeka nanamuhla. Imithombo yezindaba ivame ukwenzelela kwezepolitiki futhi isebenzise izindlela zabo zokuxhumana ukuqhubeka nokusabalalisa lokho kukhetha. Futhi ngaphandle kokukhetha, konke kuvikelwe ngaphansi kweSichibiyelo Sokuqala.
Lokho akusho ukuthi angihloniphi ubuntatheli. Futhi ngifuna ubuntatheli buphile. Ngikholwa wukuthi ukufundisa izintatheli ukuthi ziphenye, zigcine uhulumeni wethu, izinkampani zethu kanye nomphakathi wethu kubaluleke kakhulu kunakuqala. Ama-Blogger awavamisile ukumba ngokujulile (yize lokho kuyashintsha). Imvamisa nje sivele sibheke izihloko ngenkathi izintatheli ezinolwazi zinikezwa isikhathi esithe xaxa nezinsizakusebenza zokumba kujule.
Angihlukanisi ukuvikelwa kwabezindaba nalokho kwama-blogger, noma kunjalo. Akekho ongakhombisa umugqa lapho ubuntatheli buphela khona futhi ukubhuloga kuqala khona. Kunamabhulogi amangalisayo anezinto ezibhalwe kangcono ezingcono futhi eziphenywe ngokujulile kunezinye izindatshana esizibonayo ezitolo zanamuhla. Futhi akukho okuhlukanisa okuphakathi. Amaphephandaba manje asefundwa ku-inthanethi kakhulu kunoyinki nephepha.
Abezombusazwe bethu besimanje kufanele babone ukuthi i-blogger yanamuhla ifana kakhulu nezintatheli ezathola ukuvikelwa ngo-1791 ngesikhathi kudluliswa iSichibiyelo Sokuqala. Leyo nkululeko yayingeyona indima yomuntu obhala amagama ngendlela efanayo namagama uqobo. Ingabe i- Cindezela abantu noma isangoma? Ngithumela ukuthi kungaba noma kukabili. Inhloso yokuvikelwa kwakuwukuqinisekisa ukuthi noma yimuphi umuntu angabelana ngemicabango yakhe, imibono yakhe kanye nemibono yakhe emphakathini okhululekile… futhi akazange abambe ukuvikeleka eqinisweni kuphela.
Ngilwela inkululeko yabezindaba, futhi ngokungahambisani nakho konke ukwephulwa koMthethosisekelo ukuthi ngithule ngamandla hhayi ngesizathu izikhalazo noma ukugxekwa, okulungile noma okungenabulungiswa, kwezakhamizi zethu mayelana nokuziphatha kwabamele bazo. UThomas Jefferson
Abezombusazwe bethu banamuhla babuza inkululeko yebhulogi ngazo kanye lezo zizathu okhokho bethu ababefuna ukuvikela ngazo abezindaba ngeSichibiyelo Sokuqala.
Ama-Buzzwords wokumaketha avela kuMashable
Ama-Social Metrics kuDeshibhodi yakho ye-WordPress